ကလေးများအတွက်အကောင်းဆုံးဂိမ်း ကြွက် | မိုဘိုင်းဖိုရမ်
Eder Ferreno | 22/11/2021 11:41 | အားကစားပြိုင်ပွဲ
ကြွက်ကလေးများသည် ဆယ်ကျော်သက်များဖြစ်သည်။ သူတို့သည် အွန်လိုင်းကစားရင်း အခန်းထဲတွင် နာရီပေါင်းများစွာသော့ခတ်ထားကြသည်။ အခြားကစားသမားများနှင့်။ ဤသည်မှာ အနည်းဆုံး ၎င်း၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ယခု နှစ်အနည်းငယ်ကြာ တည်ရှိခဲ့သော အယူအဆတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် မည်သည့်နေရာသို့မှ မရောက်နိုင်တော့ပေ။ ဤလှုပ်ရှားမှုသည် လွန်ခဲ့သော ဆယ်နှစ်က မူလအစရှိပြီး ယနေ့ထက်တိုင် အလွန်ရှင်သန်နေသေးသည်။ အကယ်၍ သင်သည် သို့မဟုတ် သင့်ကိုယ်သင် တစ်ဦးတည်းဟု ယူဆပါက၊ ၎င်းတို့သည် ကြွက်ကလေးများအတွက် အကောင်းဆုံးဂိမ်းများဖြစ်သည်။
ကြွက်ကလေးများနှင့် နီးစပ်သော ဂိမ်းများစွာရှိသည်။. ထို့ကြောင့် အောက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား ကြွက်ကလေးများအတွက် အကောင်းဆုံးဂိမ်းများကို ရွေးချယ်ထားသည်။ သင်တစ်ဦးတည်းဖြစ်စေ သို့မဟုတ် သင့်ကိုယ်သင်တစ်ဦးတည်းဟု ယူဆသည်ဖြစ်စေ ၎င်းတို့သည် သင့်အခွေတွင် မလွတ်သင့်သောဂိမ်းများဖြစ်ပြီး သင်သည် အနှောင့်အယှက်မရှိဘဲ နာရီပေါင်းများစွာ ကစားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
2 Duty ၏ခေါ်ဆိုမှု
5 ကြွက်ကလေးများကို ဘယ်လိုခွဲခြားသိနိုင်မလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့စတင်သည် ကြွက်ကလေးများနှင့် ဆက်စပ်မှုအရှိဆုံးဂိမ်းများထဲမှ တစ်ခု. Minecraft သည် စျေးကွက်တွင် ဂန္ထဝင်ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာ ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်သော်လည်း ၎င်းသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် followers အများအပြား ဆက်လက်ရှိနေပါသည်။ ၎င်းသည် ၎င်းကို အဆက်မပြတ်ကစားနေသည့် ကြွက်ကလေးများ၏ ရာခိုင်နှုန်းများစွာပါရှိသော ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် ၎င်းသည် ဤအမျိုးအစားစာရင်းတွင် မလွတ်နိုင်သော ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Minecraft သည် အဘယ်ကြောင့် ထိုကြွက်ကလေးဂိမ်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သနည်း။ ကြွက်လေးတွေလို့ ခေါ်တာ တွေ့နိုင်မယ်။ ဒီဂိမ်းမှာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ကစားသမားတွေပါ။. ဟင်းချက်နည်းတွေအကုန်သိတယ်၊ တခြားဘယ်သူမှမလုပ်သလို သူတို့ရဲ့နယ်မြေတွေကို ခုခံကာကွယ်တယ်၊ တခြားသူတွေထက် ပိုကောင်းအောင်တည်ဆောက်တယ်၊ တိုးတက်ဖို့ လှည့်ကွက်အမျိုးမျိုးကို သိပြီး သူတို့တိုးတက်စေမယ့် အရာဝတ္ထုတွေကို အမျိုးမျိုးဖန်တီးနိုင်တယ်။ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတွင် multiplayer တွင် အထင်ရှားဆုံး ကစားသမားများဖြစ်ပြီး Minecraft တွင် ရေထဲတွင် ငါးကဲ့သို့ လှုပ်ရှားကြသည်။
Minecraft သည် ဂိမ်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤကြွက်ကလေးများဟုခေါ်သော ပထမလှိုင်းသည် ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ဤအမျိုးအစားအသုံးပြုသူ၏အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းများထဲမှတစ်ခုအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။ ဒါကြောင့် သင်ဟာ တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်တယ် ဒါမှမဟုတ် သင်တစ်ဦးဖြစ်မဖြစ်သိချင်ရင် Minecraft မှာ နာရီပေါင်းများစွာ သုံးစွဲခဲ့မယ်ဆိုရင် အဖြေကို သင်သိပြီးသားပါ။
Call of Duty သည် Minecraft ဂိမ်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ပထမလှိုင်း သို့မဟုတ် ကြွက်ကလေးများ၏ မျိုးဆက်ကို သင်တွေ့နိုင်သည် ။ အထူးသဖြင့် 2000 ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွေမှာ လူသိများလာခဲ့တဲ့ ဒီဂိမ်းဟာ စျေးကွက်မှာ တိုးတက်မှုနဲ့ တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ အဲဒီ ကြွက်ကလေးတွေ မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးရက်စွဲတွေ ဖြစ်တယ်လို့ ဝဘ်စာမျက်နှာ အများအပြားမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ Call of Duty ၏ multiplayer mode သည် ဤအသုံးပြုသူများကြားတွင် ၎င်း၏ကျော်ကြားမှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေသောသော့များ သို့မဟုတ် အကြောင်းရင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤဂိမ်းတွင် ကြွက်ကလေးများ အများအပြားရှိနေခြင်းသည် အမြဲအငြင်းပွားစရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူများကြားတွင် multiplayer mode သို့မဟုတ် Battle Royale ဖြင့်။ ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ နိုင်ငံများစွာမှ ကြွက်ကလေးများ အများအပြား ရှိနေသဖြင့် ဘာသာစကားပေါင်းစုံဖြင့် ရင်ဆိုင်ရတော့မည်ဖြစ်သည်။ သူတို့က မင်းကိုသတ်ရင် ဒါမှမဟုတ် မင်းသူတို့ထက် ပိုကောင်းတဲ့ အနေအထားမှာရှိနေရင်၊ မင်းသူတို့ထက် ပိုဆိုးရင် ဒါမှမဟုတ် ရန်သူနည်းနည်းပဲသတ်ရင် မင်းကို စော်ကားမယ့်ကစားသမားတွေပါ။ ဘာပဲလုပ်လုပ် ကောင်းကောင်းသိမှာမဟုတ်ဘူး။
ထွက်ရှိပြီးသော ဂိမ်းဗားရှင်းအမျိုးမျိုး၊ ၎င်း၏နောက်ဆက်တွဲများစွာသည် ကြွက်ကလေးများကြားတွင် ရေပန်းစားနေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Call of Duty သည် ထိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ကြွက်ကလေးဂိမ်းများထဲမှ တစ်ခုဟု ယူဆဆဲဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ Multiplayer မုဒ်သည် ဤခေါင်းစဉ်တွင် ဤမျှများပြားသော အကြောင်းရင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ယနေ့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် သစ္စာအရှိဆုံးနောက်လိုက်များ အမြောက်အမြားရှိသည့် ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်နေဆဲဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းသည် အပြောင်းအလဲမရှိဟု ထင်ရသည်။
Fortnite သည် ယနေ့ခေတ် ကြွက်ကလေးများအတွက် ရေပန်းအစားဆုံးဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။မျိုးဆက်သစ် ကြွက်ကလေးများကြား အထူးရေပန်းစားသည့် ဂိမ်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် စျေးကွက်ရှိ Call of Duty ကဲ့သို့သော ခေါင်းစဉ်များမှ လူများစွာအတွက် လွှဲပြောင်းရယူထားသော ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့၏ Battle Royale သည် ကစားနေချိန်တွင် မည်သူမဆိုထက်ပို၍ ဟစ်အော်စော်ကားသော ဤကြွက်ကလေးများအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော ဆက်တင်ဖြစ်ပြီး သင်ကစားနေချိန်တွင် ၎င်းတို့ကို အလွန်လျင်မြန်စွာ သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ကြွက်ကလေးများသည် အရေခွံအကောင်းဆုံး ကလေးများဖြစ်သည်။အကောင်းဆုံးတည်ဆောက်သူတွေ၊ Fortnite မှာ လျှို့ဝှက်လှည့်ကွက်တွေအားလုံးကို သိတဲ့သူတွေ ဒါမှမဟုတ် ဂိမ်းထဲမှာ အကောင်းဆုံးလက်နက်တွေ ပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေ။ ဒီတော့ မင်းဘာတွေ့မယ်ဆိုတာ မင်းသိတယ်- နေရာတိုင်းကို စော်ကားတယ်။ မကြာသေးမီက အသားအရည်မရှိခြင်း၊ သေနတ်မပစ်မီ သတ်ပစ်ပါက၊ စာရင်းတစ်ခုတွင် ပိုကောင်းသည် သို့မဟုတ် ပိုဆိုးမည်ဆိုလျှင် ... အကြောင်းအရင်းရှိပါစေ၊ နေရာတိုင်းတွင် အော်ငေါက်စော်ကားမှုများကို မျှော်လင့်ပါ။
Fortnite သည် အသုံးပြုသူအများအပြားအတွက် ဂိမ်းအတွင်းရှိပတ်ဝန်းကျင်သည် အနည်းငယ်အဆိပ်သင့်သော်လည်း၊ အသုံးပြုသူများစွာရှာဖွေလိုသော အလွန်အကျွံစော်ကားမှုများနှင့် ရန်ပွဲများကြောင့် Fortnite သည် အလွန်ကျော်ကြားသောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
GTA သည် ကြွက်ကလေးများကို ပိုမိုတွေ့ရှိသည့် sagas များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ဂိမ်း၏မည်သို့ထုတ်ဝေသည်ဖြစ်စေ။ ၎င်းသည် ဤအသုံးပြုသူများကြားတွင် အလွန်ရေပန်းစားသော အဆိုပါခေါင်းစဉ်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် ဤဂိမ်း၏ multiplayer mode တွင် (ဥပမာ GTA5တွင်) တွင် ကြွက်ကလေးများ များစွာရှိနေသည်၊ ယခုအချိန်တွင် သင်သေချာပေါက်သိထားသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကို ဤစာရင်းရှိ အခြားဂိမ်းများတွင် ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
မင်းသူတို့ကို ပြေးရင်မသတ်ခင် မင်းကိုသတ်ရင် မင်းကိုသတ်ရင် … အခြေအနေက ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေ သူတို့မကြိုက်တဲ့အရာကို လုပ်ရင် သူတို့ဘက်ကနေ စော်ကားတာတွေ အများကြီးမျှော်လင့်နိုင်တယ်။ ဤဂိမ်းစီးရီးများသည် ကြွက်ကလေးများကြားတွင် အလွန်ရေပန်းစားနေဆဲဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့တွင် ဤကစားသူအများအပြားပါဝင်သည့်မုဒ်ကြောင့်ဖြစ်သောကြောင့် သင့်စက်ပစ္စည်းများတွင် ကစားသည့်အခါ ၎င်းတို့အများအပြားကို တွေ့ရှိရမည်ဖြစ်သည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ ဤဂိမ်းအမျိုးအစားများတွင် အဆက်မပြတ်ရှိနေသောကြောင့် ၎င်းအတွက် ပြင်ဆင်ထားရန်ကောင်းပါသည်။
ကြွက်ကလေးများအတွက် အကောင်းဆုံးဂိမ်းအချို့ကို ဖော်ပြထားပါသည်။ကြွက်ကလေးတွေလို့ ခေါ်တဲ့ အရေအတွက် ပိုများတဲ့ ဂိမ်းတွေလည်း ပါပါတယ်။ ထို့အပြင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သူ့ထံမှ ပုံမှန်မျှော်လင့်နိုင်သည့်အရာတစ်ခုကို သင့်အား စော်ကားပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်၊ အမှန်တကယ်မှာ မည်သည့်အွန်လိုင်းဂိမ်းတွင်မဆို ကြွက်ကလေးကို အမြန်ဖော်ထုတ်နိုင်စေရန် ကူညီပေးမည့် ကဏ္ဍများစွာရှိပါသည်။ ဤအရာများသည် ကစားသည့်အခါ ကြွက်ကလေးနှင့် ဆက်ဆံရကြောင်း သိရန် ကူညီပေးမည့် လက္ခဏာများ သို့မဟုတ် သရုပ်ဆောင်နည်းများ ဖြစ်သည်-
အသက်အရွယ်: သူတို့နာမည်က ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားပြီး တော်တော်များများမှာ အသက် 8 နှစ်ကနေ 16 နှစ်ကြား ကလေးတွေဖြစ်ကြတယ်။ သူတို့သည် အတွေ့အကြုံနည်းသော ကလေးများဖြစ်ပြီး အရာရာကို စော်ကားခြင်းမှာ ၎င်းတို့၏တုံ့ပြန်မှုအတွက် အခြားအရာများကို မသိသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ သူတို့ကစားသည့်ဂိမ်းများသည် အများအားဖြင့် ယခုခေတ်ရေပန်းစားသောဂိမ်းများ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့နှစ်သက်သော YouTuber သည် ထိုအချိန်တွင် ကစားနေသည့်ဂိမ်းများဖြစ်သည်။
အော်ဟစ် ကဲ့ရဲ့ခြင်း။: ကျွန်ုပ်တို့အွန်လိုင်းကစားနေချိန်တွင် ကြွက်ကလေးများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် အရှင်းလင်းဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ အော်ဟစ်ခြင်းနှင့် စော်ကားခြင်းများစွာကို ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်နိုင်သည်။ သူတို့က ဂိမ်းထဲက တခြားကစားသမားတွေထက် ပိုကောင်းတယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့အတွက် အော်ဟစ်ခြင်း၊ မောက်မာခြင်း၊ နာမည်ခေါ်ခြင်းများစွာနဲ့ သူတို့ဆီက အဲဒီသဘောထားကို ကျွန်တော်တို့ မျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ငါတို့က သူတို့ထက်သာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် အဲဒီအော်သံတွေကို ငါတို့တွေ့နိုင်တယ်။
trolls: သူတို့က ဂိမ်းတစ်ခုမှာ ကောင်းကောင်းမကစားရတဲ့အခါ ဒါက သိပ်ကို ပုံမှန်သဘောထားပါပဲ။ သူတို့မျှော်လင့်ထားသလို ဖြစ်မလာဘူးဆိုရင်၊ သူတို့က သင့်ကို စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပြီး တကယ့် trolls တွေလို ပြုမူလာမှာက ပုံမှန်ပါပဲ။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့် ဘုံသဘောထားတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော် ယင်းသည် ၎င်းတို့ဘက်မှ ရင့်ကျက်မှုကင်းမဲ့မှုကို ညွှန်ပြနေသည့်အရာဖြစ်သည်။
မိုက်ခရိုဖုန်း: ကြွက်ကလေးများတွင် အဖြစ်များလေ့ရှိသည့် နောက်တစ်မျိုးမှာ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏မိုက်ခရိုဖုန်းကို အမြဲဖွင့်ထားသူများဖြစ်သည်။ သူတို့သည် အမြင့်ဆုံးအသံဖြင့် အော်ငေါက်ကြသူများဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ကစားသမားများစွာကို အာရုံပြောင်းစေပြီး အလွန်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သော အရာဖြစ်သောကြောင့် ဤဂိမ်းများထဲမှ တစ်ခုကို သင်ထည့်သွင်းသည့်အခါတွင် သင်သည် ဤဖြစ်ရပ်အတွက် ပြင်ဆင်ထားသင့်သည်။
မိတ္တူ- ၎င်းတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့လည်း အသိအမှတ်ပြုနိုင်သည့် ရှုထောင့်တစ်ခုမှာ ၎င်းတို့၏ စကားစုများ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ အပြုအမူများသည် ထိုအချိန်က နာမည်ကြီး YouTubers အချို့၏ ကော်ပီများသာ ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားသူများထံမှ သိထားပြီးဖြစ်သော အသုံးအနှုန်းများကို ၎င်းတို့ ကူးယူကြောင်း သင်အသိအမှတ်ပြုနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့သည် ကလေးများဖြစ်သောကြောင့် ကြိုတင်မှန်းဆနိုင်သောအရာဖြစ်သည်။
ဒါကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရင် ဒါဟာ ကြွက်ကလေးမှန်း သိနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ဒါကြောင့် သူ့ဂိမ်းကို မဝင်ရပါဘူး။ အွန်လိုင်းအများအပြားကစားမုဒ်ပါသော ဂိမ်းများသည် ကံမကောင်းစွာဖြင့် လူများစွာအတွက် ကလေးကြွက်များစွာကို ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်နိုင်သည့်နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သင်သည် ပြင်ဆင်ထားပြီး ၎င်းတို့ရောက်ရှိနေခြင်းသည် သင်၏ ဂိမ်းအတွေ့အကြုံကို မပျက်စီးစေဘဲ ၎င်းသည် ၎င်းနှင့်ထိုက်တန်သော အရာမဟုတ်သောကြောင့် ကောင်းပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » အားကစားပြိုင်ပွဲ » ကြွက်ကလေးများအတွက် အကောင်းဆုံးဂိမ်းများ
Steam VR- ၎င်းသည် ဘာလဲ၊ ၎င်းကို ထည့်သွင်းနည်းနှင့် အဓိကဂိမ်းများ